Olona iray ve?
2012-05-23 @ 00:55 in Politika
Na dia tsy te-hanoratra lava momba ny zava-nisy tamin'ny 19 mey 2012 aza ny tena, tsy afa-manoatra fa mba misy ny tsy aritra. Olona iray kosa ve dia nahavita naharatra olona, nahasambotra maro hafa ary nahapotika zavatra maro ihany koa ankoatra an'i Charlot? Sa izay ilay hoe rehefa tena tafahoatra ny lainga vao maika mino ny olona? Anjaran'ny tsirairay no mieritreritra.
Manaraka izany ihany koa, tifi-danitra nataon'ny miaramila teo akaikin'ny Rarihasina no nisy nilaza fa misy mersenera indray tany ho any. Tsy vao maika ve nampidina ireo miaramila tarihinao ho mpikarama an'ady izany? Rehefa maro anie ny nanatri-maso fantatry ny hafa hatrany ny lainga tadiavinao aely!
Fa na izany na tsy izany, nahita imaso ny fitifirana toy ny basy ny olona tsotra mijoro amin'ny sisin-trano aho ka voatery nitondrana maika ilay olona ho any amin'ny hopitaly, Tifitra teo anolonan'ny glacier io. Nahita ihany koa ny tena sady niharany fa ireo ao amin'ny 4X4 mifanaretsaka ihany no manely vovoka mandatsa-dranomaso tamin'ny mpanao gazety sy ny miaramila sy polisy tao anaty kamiao, ireo ihany koa no tonga dia nitifitra ireo olona mbola nisakafo tao anaty efitra fisakafoanana iray tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa-dranomaso ihany. Raha miteny hoe mitifitra aho eto fa tsy tifi-danitra dia mitifitra mahitsy toy ny mitifitra haza izay.
Indreo ny sary ankoatra izay efa nataoko tato tamin'io zava-nitranga io ihany.